Malunga nathi - i-Dongguan Sunkia Machinery Co., Ltd.
Oluzenzekelayo Opp wokulaminetha Machine
Zenzekelayo Window wokulaminetha Machine
Oluzenzekelayo wokulaminetha Kwaye Ukwaleka Machine Kumgca
Ukuqengqeleka okuzenzekelayo kuMatshini wokuLaminetha eRoo
Oluzenzekelayo Thermal wokulaminetha Machine
Umatshini wokuhambisa i-UV ngokuzenzekelayo
Oluzenzekelayo Varnishing Kwaye Calendering Machine
Isantya esiphezulu se-UV Varnishing Machine
Isantya esiphezulu seCalendering Machine
Umatshini oMandla wokuMakisha weBhokisi
Dongguan Sunkia Oomatshini Co., Ltd.
Oomatshini bethu bayathandwa kwaye bavavanywa phezulu ngabathengi abaninzi basekhaya nakwamanye amazwe.
Oomatshini baseSunkia ngumenzi ophambili ojolise kuphuhliso nakwimveliso yoomatshini bokushicilela abaphezulu emva kweminyaka eli-12. Singabantu inkampani high-tech ababenelungelo lobunikazi lobugcisa kumatshini wokulaminetha kwimisebenzi emininzi. Oomatshini bokutyabeka bephepha abakrelekrele. Oomatshini bethu banesatifikethi se-CE. Sime eDalingshan Town, kwisiXeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong, elineqela lokuqala lokuvelisa, inkqubo yokuqinisekisa umgangatho, kunye nophando lobuchwephesha kunye neqela lophuhliso. Siyinkampani eqinisekisiweyo ye-ISO.
Besisoloko sigxininisa kwimigaqo ye "Umgangatho, ukuthembeka, kunye noMnqweno"okoko yasekwa ngo-2008. Phantse uninzi lwezinto ezintsha ezintsha kule minyaka ili-12 idlulileyo kwaye iye yaba yeyona nto iphambili eTshayina. Ishishini lethu likhula ngokuqhubekekayo kwaye umgangatho wethu kunye nenkonzo zisizisela uxabiso oluphezulu kubathengi baseTshayina nakwiimarike zamanye amazwe. inkokeli kwicandelo layo kwaye izinikele ekuveliseni iteknoloji yokutyabeka iphepha kunye nezixhobo ezisemgangathweni ophezulu kwiinkampani ezininzi zokushicilela kunye nenkampani yoluntu.
Iimveliso zethu eziphambili ngumatshini wokulaminetha we-OPP ngokuzenzekelayo Umatshini wokucoca i-UV, umatshini wokulaminetha weewindows ezininzi, Isantya esiphakamileyo sokuqengqa umatshini, Umatshini wokukhawulezisa isantya esiphezulu, izixhobo zemveliso zebhokisi engqongqo kunye nebhokisi yesipho, kunye nezinye oomatshini bokushicilela abanxulumene nabo. Saziwa kakhulu kwaye sinconywa ngabathengi. Yeyona nkampani iphambili kushishino lokupakisha. Okwangoku, inkampani yethu igcine intsebenziswano kwishishini kunye namashishini amaninzi oshicilelo olunzima lwasekhaya nolwangaphandle. Inkampani yethu ilandela ukusebenza kakuhle ngabaphathi, ukusinda ngomgangatho, kunye nophuhliso ngokwaziwa, kwaye iphucula umgangatho kunye neenqobo zeemveliso ngokubonakalayo, ibambelela kubathengi beshishini elijolise ekuphumeleleni. Wamkelekile ngokufudumeleyo ukuba uqhagamshelane nathi usindwendwele. Enkosi.
Injongo yethu kukusombulula iimveliso zokupakisha iphepha kwaye sisebenzise ubuchule bethu ukufezekisa iinjongo zokubola / ukubuyisela izinto kwakhona kunye nokukhuselwa kwendalo okusingqongileyo, okunefuthe elide kwimveliso yokupakisha kunye neyoshicilelo yexesha elizayo. Injongo yethu kukubonelela ngokupakisha koomatshini bokuhombisa umphezulu, oomatshini abongezwe ngexabiso eliphezulu, ukuvelisa okuqhubekayo, impumelelo yomthengi, impumelelo yakhe.
I-289 # Jiaoyu Road, iDalingshan Idolophu, iDongguan City, Guangdong, China